Ohatra tsara amin'ny famolavolana sary mihetsika 50 | Famoronana an-tserasera
Ohatra amin'ny famolavolana sary mihetsika 50 mahafinaritra
Ny sinema dia iray amin'ireo taranja manome kilalao betsaka amin'ny famolavolana, satria miresaka fifehezana izay ilana fomba iray na famoronana iray hafa tena ilaina isika, zavatra iray izay iraisan'ny famolavolana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitanao tsy latsaky ny dimampolo ny famoronana sary mihetsika misy sary mihetsika, satria ny ankamaroan'izy ireo dia tena mahay sy mamorona.
Azafady mba mariho fa ny orinasa mpiara-miasa dia mety ho noforonin'ny saina ary noforonina ho an'ny sary fotsiny.
1 Ahoana no tokony hisy ny sary famantarana ny sinema
2 Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana sarimihetsika
3 Ohatra amin'ny sary mihetsika 45 mahafinaritra
3.4 Akanjo sarimihetsika
3.5 Sarimihetsika akondro
3.6 Klub sarimihetsika afrikanina
3.7 Sarimihetsika fano
3.8 Sarimihetsika Roller Coaster
3.9 Sarimihetsika misarika
3.10 Diviziona Sinema
3.11 Rihana 6
3.12 Sarimihetsika baomba
3.13 Sinema sarimihetsika madio
3.15 Sarimihetsika masaka
3.16 Sarimihetsika mahaleo tena
3.17 91 Sekonda
3.19 Sarimihetsika voasarimakirana voadidy
3.20 Sarimihetsika Art
3.21 Sarimihetsika taratasy
3.25 Fambolena Reel
3.26 Fetiben'ny sarimihetsika Bristol
3.27 Sinema Bay City
3.28 Sarimihetsika Bumpy Road
3.29 Jiro fifamoivoizana Audiovisual
3.30 The Studios Studios
3.31 Sarimihetsika isan'andro
3.32 Sarimihetsika mahatsiravina
3.37 Dolly isika
3.39 Sarimihetsika Honolulu
3.41 Quotes sarimihetsika
3.42 Sarimihetsika literatiora
3.44 Sarimihetsika mihetsika miadana
3.45 Sarimihetsika sarimihetsika eo noho eo
Ahoana no tokony hisy ny sary famantarana ny sinema
Un Saika afaka miteny ho azy ny sary famantarana ny sinema raha mahay mampiasa ireo singa mifandraika indrindra amin'ity orinasa ity. Izahay dia manana amin'ny lafiny iray ny kasety sarimihetsika, ny fakan-tsary, ny endri-tsoratra vitsivitsy na ny tapakilan'ny sarimihetsika aza. Raha ny marina, amin'ny faran'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita karazana logo sinema isan-karazany tsara izay hanampy anao hanapa-kevitra samirery raha toa ka mamorona bilaogy na pejy natokana ho an'ity tontolo ity amin'ny majika be dia be sy ny habetsahan'ny fialamboly tsara ananany nomena ny hazakazantsika.
Raha miresaka momba ny endri-tsoratra malaza isika,iza no tsy afaka mampifandray ny satrok'i Bowlin sy tehina? Sa ny sary Alfred Hitchcock raha ny fijeriny? Ireto misy ohatra vitsivitsy ahafahantsika mampifandray haingana ny sary hita amin'ny sary famantarana natokana ho an'ny indostrian'ny sarimihetsika. Ka miaraka amina asa sy fikarakarana kely dia afaka mahita ny endritsika manokana sy tany am-boalohany isika; na dia hilaza ny marina aza dia afaka manova ny sasany amin'ireo izay ho hitanao fa tena manaitra tokoa izahay.
La clapperboard sarimihetsika koa dia singa iray hafa hita maso ireo izay akaiky indrindra hisolo tena an'io logo io. Toy ny azontsika atao ny mampiasa ny endrika boribory amin'ilay horonan-tsary mba hamoronana maso manintona. Hahita iray natokana ho an'ny sarimihetsika mampatahotra ianao izay nampiasana azy io endrika boribory io, ka teboka mainty telo no misolotena ny saron'ilay sarimihetsika mampatahotra Scream. Ny fahatsorana sy ny fahaiza-mamorona miaraka mba hamoronana ilay sary mihetsika tadiavintsika.
Ahoana ny fomba hamoronana sary famantarana sarimihetsika
Efa nilaza izahay fa afaka mahazo aingam-panahy amin'ny ohatra maro ianao izay ho hitanao etsy ambany, fa ahoana no fomba hamoronana sary famantarana sinema? Ny fampiasana ny mainty sy fotsy tena miverimberina io satria io no niandohan'ny sinema talohan'ny nisehoan'ny loko. Izy io dia fototra ahafahantsika mandeha mamorona sary miavaka izay mitondra izany rivotra mahazatra izany.
Etsy ankilany afaka manao izany koa isika aingam-panahy avy amin'ny sinema tamin'ny taona 80, izay, na dia tsy dia manana kalitao be aza, dia manana singa mampiavaka azy izay hitantsika ankehitriny miaraka amin'ireo andian-tantara toy ny Stranger Things ary afaka nampahatsiahy ireo sarimihetsika mampientanentana sy maro hafa. Neon sy ireo loko volomparasy, mena ary volomboasary miaraka amin'ny tsy fitovizany dia mety ho zava-dehibe hafa koa.
Ary tsy azontsika atao ihany koa ny tsy miraharaha typografika tsara. Ny sans serif dia azo ampiasaina hamoronana typeface 2001., Space Odyssey, mba hahafahanao mahazo hevitra momba ny mahaliana raha mety ho aingam-panahy avy amina endritsoratra hamorona an'io sary famantarana io. Azontsika atao ny mametraka ny lantom-peo amin'ny singa hita maso sasany toy ny horonan-taratasy, ny clapperboard, ny tapakilan'ny sarimihetsika na ny mankany amin'ny sinema ankehitriny, mampiasa sary famantarana izay maneho ny streaming amin'ny alàlan'ny serivisy toa ny HBO na Netflix.
La sarin'ny takelaka na smartphone miaraka amin'ny kasety sarimihetsika Ny fandehanana miaraka amin'ny mainty sy fotsy dia mety ho fototra lehibe. Avy eo dia ny hanome azy io fifandraisana etsy sy eroa hahitana ireo tsipika afaka mamorona firindrana misy eo amin'ireo singa samihafa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny fampidirana ireo singa vaovao nampifandraisinay tamin'ny sinema ankehitriny izahay. Sinema iray izay nanova ny endrika, satria, na dia mbola misy ireo efitrano lehibe ireo aza, eo ihany koa ny sofa ao an-trano, ny fibaikoana ny fahitalavitra, finday avo lenta handefasana amin'ny efijery ary ilay Smart TV izay singa hita maso tokoa.
Si mandeha any amin'ny Netflix na HBO izahay, manaitra tokoa ny typography-ny. Ny zava-drehetra dia tokony hanova kely azy io ary hametraka ny anaran'ny orinasanay na ilay bilaogy izay tianay hanangonana ny famoahana farany ny vaovao mafana indrindra amin'ny andian-tsarimihetsika, fanadihadiana na sarimihetsika.
Zava-dehibe hatrany ny wink amin'ny singa hita maso mifandraika amin'ny sinema, na ny mahazatra, ny valopolo taona na ny ankehitriny. 3D koa azo ampiasaina. Fa maninona ny jiro latabatra ampiasaina amin'ny sarimihetsika Pixar maro? Sa ny aloky ny sasany amin'ireo olona mampiavaka azy? Betsaka ny hevitra, koa ny fanandramana sy ny famelana ireo izay tena tiantsika indrindra hiatrika ireo hevitra vaovao tonga ao an-tsaina.
Ohatra amin'ny sary mihetsika 45 mahafinaritra
Manao a famerenana ireo logo sinema tsara indrindra ary ireo singa izay mampifandray haingana ny iray amin'ilay indostrian'ny fialamboly izay nanome be dia be nandritra ny am-polony taona maro. Logo izay maneho ny sarimihetsika malaza indrindra na ilay horonantsary fampiasa amin'ny maro.
Tsy adinonay ny sasany amin'ireo tetika hanaovana sary famantarana sarimihetsika tsara ary mampifandray haingana ny bilaoginay na ny orinasanay amin'izany orinasa izany. Manome anao hevitra izahay momba ny fampiasana ireo singa vaovao kokoa toa ny Netflix na ny logo HBO; ary tsy manadino ny seza sy ilay marathon an'ny andian-tsarimihetsika.
Everti sintomy io kasety horonantsary io hamoronana sary famantarana kilasika ary anaovan'ny loko volamena ny Oscar Oscars.
Raum mandray antsika alohan'ny typeface mahazatra tsy misy afa-tsy ity.
Ny clapperboard efa niasa toy ny hareza hanaratra ny fotsy ary anarana mainty sy volombava toa ilay an'ny orinasa natokana ho an'ny sinema, tsara, sa tsy izany?
Film Closet USA ny an'ny efitra fisoloana akanjo ary inona no tena zava-dehibe amin'ny famokarana sarimihetsika. Ampiasao ho toy ny maodely akanjo ny kasety sarimihetsika.
Tsy miditra isika Sarimihetsika an'i Woody Allen, saingy eny amin'ny hevitra tsara izay mampiasa gilding volamena sy ireo akondro izay kasety horonantsary.
Klub sarimihetsika afrikanina
Como raha sinema solony, ity logo ity dia tsy manadino ireo loko izay maneho an'i Afrika hamorona sary famantarana sinema tsara.
Efa nilaza an'izany izahay ny fampiasana ny endrika boribory horonan-tsarimihetsika dia tsara tahaka ity logo ity dia tanterahina tsara.
Sarimihetsika Roller Coaster
Ny horonan-taratasy napetraka teo amboniny ny fakantsary sarimihetsika no fialan-tsiny tsara indrindra manidina amin'ny roa alina Roller Coaster. Hevitra lehibe iray hafa amin'ny sary famantarana.
Sarimihetsika misarika mampiasa ny farango hita eo amin'ny horonan-taratasy avy amin'ny sarimihetsika mba hamoronana sary famantarana sinematografia tena izy.
Tsy ho tsotra kokoa izany ary Ny Diviziona Sinema dia mampiasa io drafitra geometrika io miaraka amin'ny kasety sarimihetsika.
6Fitondra eny atsipy amin'ny loko izy mba hamela kasety ny sarimihetsika milatsaka hamorona izany 6. Tsotra ary tena mandaitra.
Hitanareo ny fomba ny horonan-kasety ao anaty fakantsary fakantsary Ampiasaina be io. Ankehitriny ho baomba ho an'ny "o".
Sinema sarimihetsika madio
Toy ny iray amin'ireo etsy ambony, Mampiasa io fantsom-pandrefesana io mba hamoronana azy ny sary famantarana anao nefa tsy manadino ny lanitra manga.
Filmalti dia mampiasa efijery fahitalavitra hisarika ny saina haingana, tadidinao avy amin'ilay voalaza momba ny fampiasana finday avo lenta sa takelaka?
Masaka io mandeha any amin'ny paoma an'ny paoma mamorona kasety horonan-tsarimihetsika.
Sarimihetsika mahaleo tena
about kiraro ho an'ny Independent Films.
antsika hafahafa kely izahay miaraka amin'ity logo ity, fa ny 91 segondra milaza betsaka ...
Mandeha indray izahay amin'ny iray amin'ireo singa misolo tena indrindra an'ny indostrian'ny sarimihetsika.
Sarimihetsika voasarimakirana voadidy
Voankazo indray, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nizara voasarimakirana iray ho an'io kasety sarimihetsika io.
La Origami loko maneho vorona miaraka amin'ny rakipeo sarimihetsika ho fototra.
Paper Films dia mitazona azy ho tsotra amin'izany filmstrip natao tamin'ny fomba somary abstract ary manjavozavo izay toa tena tsara. Izy io dia manana fikitika mahazatra ao amin'ny typeface izay milay.
Chaplin mihantona miaraka amin'io volombava io. Ohatra iray amin'ny famoronana sary famantarana izay mifandray haingana amin'ny sinema.
Urbia afangaro amin'ilay kasety sarimihetsika ilay tanàna izay miteraka tontolo.
Angamba iray amin'ireo sarotra ampifandraisina amin'ny sinema, saingy marika tsara izany, nanomboka ny substrate dia eto ambany izay mety ho sarimihetsika maro. Mahaliana.
Toa antsika mpiasa tany, ny kodiaran'io traktera io dia ireo horonan-kasety miorina amin'ny fakan-tsarimihetsika.
Fetiben'ny sarimihetsika Bristol
Una tapakila sarimihetsika tonga lafatra ho an'ireo tolona ireo hamoronana sary famantarana ho an'ny sinema. Mety.
Sinema Bay City
Ity sary famantarana ity miverena amin'ny fiolahana midadasika amin'ilay sarimihetsika hanehoana sary famantarana tsara miaraka amin'izany maso sy manga izany.
Sarimihetsika Bumpy Road
Saika lazain'izy ireo amintsika izany tsy matahotra ny hitondra ny kamionany izy ireo midina amin'ireo lalana be pitsiny indrindra, sarimihetsika mampientanentana? Mety.
Jiro fifamoivoizana Audiovisual
Un sary mahafinaritra miaraka amin'ny loko voalohany ary ny fampiasana ny endrika hamoronana ny jiron'ny fifamoivoizana.
The Studios Studios
Miverina indray isika ny horonan-tsary handrafitra ny tampony an'ny orinasa iray. Mety ho loharanon'ny aingam-panahy.
Una typografika mahazatra ho an'ny sarimihetsika isan'andro izany dia azo jerena ao amin'ny Antena 3.
Iray amin'ireo voalohany indrindra rehetra ary tsotra noho ny iray. fampiasana izany endrika boribory izany amin'ireo teboka boribory telo ireo amin'ny mainty hanome izany, horohoro.
Ny sezan'ny sinema? Ahoana no tsy nieritreretantsika azy teo aloha. Afaka nanao ny zavatra ny sezak'i Netflix.
Un gilasy toy ny horonan-taratasy avy amin'ny sarimihetsika.
Una toeram-piompiana sarimihetsika mihoatra ny tonga lafatra amin'ity kasety ity sarimihetsika izay ampiasaina amin'ny sary mihetsika maro be.
Sa tsy izany ny mpamokatra an'io sarimihetsika mampatahotra io miaraka amin'ny tsofa elektrika.
indray afaka miverina amin'ireo fakantsary miorina amin'ny fiara isika handraisana an-tsary ny seho ivelany. Toa ilay zavatra mandeha any.
ranoka volkano ho an'ireo tampon'isa ireo ary izany no zavatra tsotra indrindra, fa tena azo ampiharina.
Ny horonan-taratasy indray, fa amin'ity indray mitoraka ity nalaina tamina voninkazo. Hevitra tsara amin'ny maha sary famantarana sarimihetsika.
eto setroky ny orinasa Izy io dia ampiasaina ho toy ny horonan-tsary.
Mahaliana izany sary famantarana sarimihetsika izay avelantsika haka sary an-tsaina an'ny mpijery.
Para sarimihetsika kilasika ity logo ity mandeha mihoatra ny idealy. Penina hampisehoana ny teatra sy ny kilasika.
Ny loko amin'ny gradient dia toa isika alohan'ny Instagram an'ny sinema.
Sarimihetsika mihetsika miadana
Tsy azo soloina solontena tsara kokoa mihetsika miadana miaraka amin'ny sifotra. Mihoatra ny tsara.
Sarimihetsika sarimihetsika eo noho eo
Ary mandeha izahay miaraka amin'ny siny popcorn tsy banga izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Logos » Ohatra amin'ny famolavolana sary mihetsika 50 mahafinaritra
Tranonkala 10 ahafahanao manamboatra haingana sy mora ary maimaimpoana ny portfolio-nao